हस्तमैथुन गर्दाका फाइदा के-के ? हेर्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
हस्तमैथुन गर्दाका फाइदा के-के ? हेर्नुस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, साउन ४ । मानिस जन्मजात नै यौनिक हुन्छ । आफ्नो जिज्ञासु स्वभावका कारण उसले आफ्नो शरीरका बारेमा पनि खोजीनिती गर्छ र कुन अंगको स्पर्शबाट कम र कुन अंगको स्पर्शबाट बढी सुखानुभूति प्राप्त हुन्छ, थाहा पाउन थाल्छ ।
फ्रायडका अनुसार पूर्व लैंगिक अवस्थामा यौन उत्तेजनाको केन्द्र यौन अंगहरूमा हुँदैन । जन्मदेखि एक वर्षसम्मको उमेरमा यौन उत्तेजनाको केन्द्र मुख हुन्छ । फ्रायड भन्छन्— स्तनपान वा अन्य केही कुरा चुसेर एक बालकले आनन्द प्राप्त गर्छ । त्यसपछिको समयमा त्यस्तो केन्द्र मलद्वारमा हुन्छ र दिसा गर्दा बालकले त्यस्तो आनन्द पाउँछ ।
यो अवस्था १ देखि ३ वर्षसम्मलाई मानिएको छ । त्यसपछि बालक लैङ्गिक अवस्थामा प्रवेश गर्छ र उक्त अवस्थामा पनि मुख, ओठ अनि मलद्वार क्षेत्र यौन आनन्दको प्रमुख अंगका रूपमा कायम रहन्छ । त्यो अवस्थाको सुरुको समय अर्थात तीन वर्षदेखि पाँच वर्षको उमेरमा यौन उत्तेजनाको केन्द्र यौनाङ्गमा हुन्छ । केटाहरूमा लिंग यसको केन्द्र हुन्छ भने केटीहरूमा भगांकुर । यो अवस्थामा छोराहरू आफ्नै आमाप्रति र छोरीहरू पिताप्रति आकर्षित हुन्छन् ।
हस्तमैथुनले के-कस्तो असर पार्ला ?
यौन आनन्द प्राप्त गर्ने उपायमध्ये सबैजसोका लागि यौन अंगको घर्षण नै प्रमुख हो । यौनसम्पर्क गर्दा यौन अंगहरू आपसमा घर्षण गराइन्छ । मानिसले आफ्नो यौन अंगको घर्षण अरू कसैको यौन अंगमा गराए मात्र यौन आनन्द प्राप्त गर्छन् भन्ने होइन । सिद्धान्ततः सम्भोग गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन अंगको घर्षणबाट आनन्द प्राप्त गर्ने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि हुँदैन र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुन्छ भन्न मिल्दैन । यसलाई प्राकृतिक नमान्नेहरूमध्ये कसैले यसलाई पापसँग जोडेका छन् भने कसैले खराब स्वास्थ्यसँग । त्यसैले समाजमा अनेक मिथ्या धारणाहरू व्याप्त छन् । हस्तमैथुन गरे अनुहारमा दाग आउने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने, नपुंसक हुने, विवाह पश्चात् आफ्नो यौन साथीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्ने वा शीघ्र स्खलन हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमहरू व्याप्त छन् । यसले स्मरण शक्तिमा पनि ह्रासमा आउने होइन ।
बरु फाइदा पो छ त !
अर्को व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क नै नहुने भएकाले अहिले चर्चामा रहेका एचआईभी वा अन्य यौन संक्रमणहरू सर्नबाट पनि जोगिन सकिन्छ । हस्तमैथुन आफैंले खराबी गर्ने नभए पनि यससँग जोडिएर आउने हीनताबोध वा दोषीपनले समस्या उत्पन्न गराएको हुन्छ ।
मानिसले वाल्यकालदेखि नै ठूला व्यक्तिहरूको व्यवहारलाई चनाखो रूपमा अवलोकन गरिरहेको हुन्छ र त्यसैका आधारमा यौनसम्बन्धी धारणा बनाउन थाल्छ । त्यसैले यसमा हाम्रा सामाजिक मूल्य-मान्यताको ठूलो हात हुन्छ । प्राकृतिक शारीरिक क्रियाकलापसँग अमिल्दा रूपमा भएका मूल्य-मान्यताले यस्ता नकारात्मक असरहरू देखा पर्छन् । कान्तिपुर साप्ताहिकबाट साभार
ट्याग्स: hastamaithun, महिला हस्तमैथुन, हस्तमैथुन